I Kanaana na Kanana na Kanahana dia faritra tao andrefan' i Jordana (na Jordany) izay resahina ao amin' ny Testamenta Taloha ao amin' ny Baiboly sady anaran' ny razamben' ireo mponina tao amin' io firenena io koa ny hoe Kanana na Kanaana na Kanahana, ka izany no iantsoana ilay firenena hoe Tany Kanaana indraindray mba hiavahany amin' ilay razambe. Taty aoriana ny Tany Kanana dia niova anarana ho Palestina na Palestinina. Izy ilay tany nampanantenain' Andriamanitra ny Israelita araka ny Baiboly. Nonina tsikelikely tao Kanana ny Israelita nanomboka tamin' ny taonarivo faha-2 tal. J.K. na mety efa talohan' io aza. Angamba koa avy amin' ny fitenin' ireo Kanaanita no nahazoan' ny Israelita ny fiteny hebreo.
Ireo Tanàna-Fanjakana natanjaka tao Kanaana
1.1.1 Tantara ao amin' ny Bokin' ny Genesisy
1.1.2 Tantara ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy
1.1.3 Tantara ao amin' ny Bokin' i Jôsoa
1.1.4 Tantara ao amin' ny Bokin' ny Mpitsara
1.1.5 Tantara ao amin' ireo boky hafa
1.2 Ny Tany Kanaana ao amin' ny Testamenta Vaovao
2.1 Andron' ny Alimo
2.2 Andron' ny Vy
3 Ny kolontsaina kanaanita
3.1 Ny fivavahan' ny Kanaanita
3.1.1 Ny andriamanitra El sy ireo andriamanitra manampy azy
3.1.2 Ny fanahin' ny maty sy ny fivavahana aminy
3.1.3 Fiantraikan' ny fivavahan' ireo firenena hafa
3.2 Kolontsaina kanaanita
3.3 Ny fiteny kanaanita
Ny Tany Kanaana araka ny BaibolyHanova
Betsaka ny andalana ahitana firesahana momba ny Tany Kanaana. Araka ny Baiboly dia mitondra ny anarana hoe Kanaana ilay faritra satria taranak' i Kanaana zanak' i Hama na Kama (ilay zanak' i Noa) ny mponina ao. Fito ny isan' ny foko nonina ao amin' ny Tany Kanaana, izay omena ny anarana iombonana hoe Kanaanita na Kananita na Kanahanita, dia ny Hitita, ny Girgasita, ny Amôrita, ny Kanaanita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita. Ao amin' ny Bokin' i Jôsoa dia tantaraina ny nakan' ny Zanak' i Israely ny Tany Kanaana sy ny fitsinjarany azy amin' ireo fokon' i Israely izay tokony ho niseho tamin' ny taonjato faha-12 tal. J.K.
Ny Tany Kanaana araka ny Testamenta TalohaHanova
Tantara ao amin' ny Bokin' ny GenesisyHanova
Ny amin' i Abrahama
Tao amin' ny Tany Kanaana (hebreo: Erets Kena'an) no nonenan' i Abrama (alohan' ny naha Abrahama azy) araka ny hita ao amin' ny Bokin' ny Genesisy (Gen. 11.31; 12.5; 13.12; 16.3). Nampanantenain' Andriamanitra ho lovan' ny taranak' i Abrahama ny Tany Kanaana araka ny hita ao amin' io boky io (Gen. 17.8). Tao koa no nahafatesan' i Saraha vadin' i Abrahama sy nandevenana azy (Gen. 23.2; 23.19).
Ny amin' ireo zanak' i Isaaka
Tsy nanaiky ny zananany haka vehivavy kanaanita ho vady i Isaka (Gen. 28.1; 28.6; 28.8; 31.18). Izany no nitadiavan' i Jakoba vady tany amin' ny tanin' ireo havany (Gen. 33.18; 35.6). I Esao kosa tsy nanaraka izany fa naka vady kanaanita (Gen. 36.2-6; 37.1).
Ny amin' i Jôsefa zanak' i Jakoba
Ny tantaran' i Jôsefa izay namidin' ireo rahalahiny sy ny nahatonga azy lasa mpanapaka tao Egipta dia iresahana matetika ao amin' ny Baiboly ny fandehanan' ny zanak' i Jakoba mandroso sy miverina eo anelanelan' i Kanaana sy i Egipta (Gen. 42.5-32; 44.8). Rehefa nifankahalala i Jôsefa sy ny rahalahiny dia naka an-drainy sy ny fianakaviany avy tany Kanaana ho any Egipta (Gen. 45.17-25; 46.6 sy 12 sy 31; 47.1-4; 47.13-15). Rehefa maty i Jakoba dia nentina tany Kanaana mba halevina any ny taolambalony (Gen. 48.3 sy 7; 49.30; 50.5 sy 13).
Tantara ao amin' ny Bokin' ny EksodosyHanova
Miresaka ny Tany Kanaana ny Bokin' ny Eksodosy (na Eksaody) amin' ny fitantarana ny fiomanan' ny Zanak' i Israely hiala amin' ny fanandevozana azy avy ao Egipta hifindra any amin' ilay tany nampanantenaina azy ireo. Nalefan' Andriamanitra ho any amin' i Farao i Mosesy (na Môizy) (Eks. 6.4). Rehefa avy niampita ny Ranomasina Mena ny Zanak' i Israely dia nanao hira fiderana an' Andriamanitra (Eks. 15.15). Raha tao amin' ny tany efitr' i Sinay (na Sinaia) ny Zanak' i Israely dia nihinana ny mana mandra-pahatongany any akaikin' ny Tany Kanaana (Eks. 16.35).
Tantara ao amin' ny Bokin' i JôsoaHanova
Ny Bokin' i Jôsoa (na Bokin' i Jôsoe) izay manohy ny fitantarana ao amin' ny Bokin' ny Eksodosy dia miresaka ny Tany Kanaana rehefa tafapetraka ao ny Zanak' i Israely. Isan' izany ny amin' ny tsy nihinanana intsony ny mana (Jôs. 5.12); ny fizaràna ny tany (Jôs. 14.1; 21.2); ireo fifanolanana nisy teo amin' ny fokon' i Israely mpifanolo-bodirindrina (Jôs. 22.9-11; 22.32), ny fahatsiarovan' i Jôsoa (na Jôsoe) ny nitondrany ny Zanak' i Israely niampita ny ony Jordana (Jôs. 24.3).
Tantara ao amin' ny Bokin' ny MpitsaraHanova
Voaresaka ao amin' ny Bokin' ny Mpitsara fa isan' ny firenena ao Kanaana ny Hebreo (Mpits. 3.1). Voalaza ao amin' ny hiran' i Debôra ny amin' ireo mpanjaka niady tao Kanaana (Mpits. 5.9). Resahina ny amin' i Silô izay toerana ao Kanaana (Mpits. 21.12).
Tantara ao amin' ireo boky hafaHanova
Resahina ao amin' ny Bokin' ny Levitikosy (na Levitika) sy ny Bokin' ny Nomery (na Fanisana) ary ny Bokin' ny Deoterônômia (na Deoterônômy) koa ny Tany Kanaana (in-3 ao amin' ny Levitikosy; in-11 ao amin' ny Nomery; in-2 ao amin' ny Deoterônômia).
Ny Tany Kanaana ao amin' ny Testamenta VaovaoHanova
Ny teny hoe Kanaana (grika: Χαναάν / Khanaán) dia hita intelo ao amin' ny Testamenta Vaovao, ka indroa ao amin' ny Asan' ny Apôstôly (Asa 7.11; 13.19) izay mamerina ny tantara ao amin' ny Testamenta Taloha, ary indray mandeha ao amin' ny famoahana ny demonia tamin' ny rahavavin' ilay vehivavy sirôfenisiana (na sirôfoinikiana). Ny fitantarana farany dia hita ao amin' ny Filazantsara araka an' i Matio sy ny Filazantsara araka an' i Marka; mampiasa ny teny hoe Kanaaneana na Kanaanita (grika: Χαναναία / Khananaia) i Matio; fa i Marka kosa miantso an' ilay vehivevy hoe Sirôfenisiana (grika: Συροφοινίκισσα / Surophoinikissa).
Andron' ny AlimoHanova
Ny anarana hoe Kanaana dia anarana tranainy izay efa niseho tamin' ny Andron' ny Alimo tamin' ny taonarivo faha-3 tal. J.K. Voasoratra tamin' ny vato sy tanimanga fanoratana hita tamin' ny sisam-paharavàn' ny tanànan' i Mari io anarana io izay voalaza fa faritra ara-pôlitika manokana. Faritra nonenan' ny foko maro samihafa i Kanaana ka ny Kanaanita izay mpihavana akaiky amin' ny Amôrita dia tsy iza fa ny Foinikiana na Fenisiana ihany.
Tamin' ny fanjakam-pianakaviana egiptiana faha-18 dia nanafika ny Tany Kanaana matetika ny Egiptiana, indrindra tamin' ny andron' i Amenôtepa I sy i Totmôsisy I izay nanana tafika afaka nandeha hatrany amin' ny faritr' i Eofrata avaratra, tamin' ny andron' i Totmôsisy II sy i Totmôsisy III izay nitrangan' ny ady tao amin' ny tanànan' i Megido. Ny governora atao hoe Ali El-Assi tao amin' ny tanànan' i Kadesy no nitarika ny tafika kanaanita ary ny farao Totmôsisy III no nitarika ny tafika egiptiana nanao fahirano an' i Megido sady nanery ny Kanaanita hilavo lefona.
Andron' ny VyHanova
Nanomboka tamin' ny fotoana nahalalana an' i Israely teo amin' ny tantara dia voasolon' ny anarana telo hafa ny hoe Kanaana, dia ny hoe Foinikia na Fenisia izay manondro ny faritra amorontsiraka avaratra sy ny hoe Filistia izay mifanandrify amin' ny faritra amorontsiraka atsimo ary ny hoe Fanjakan' i Israely izay any afovoan-tany.
Ny teny hoe Kanaanita na Kanaaneana izay enti-milaza ny mponin' i Kanaana dia tsy iza fa ny Foinikiana na Fenisiana ihany, satria ireo mponina ireo dia mitovy fiteny sady nivavaka amin' ny andriamanitra mitovy. Araka ny fandinihan' ny mpikaroka dia tsy nandripaka ny Kanaanita akory ny Israelita fa nifangaro taminy sady nanaraka ny fomba amam-panaony sasany koa. Ny andalana ao amin' ny Baiboly sy ny fifanakaikezan' ny fiteny hebreo nanoratana ny Baiboly amin' ny fiteny fenisiana dia heverina fa manamarina an' izany. Araka ny voalazan' ny Baiboly dia mpinamana amin' ny mpanjaka Salômôna (na Sôlômôna) i Hirama mpanjakan' i Tiro (na Tira) (jereo: Tempolin' i Jerosalema).
Ny zavatra hita tamin' ny fikarohana arkeôlôjika nataon' i Israël Finkelstein tamin' ny taona 1990 dia toa manaporofo fa tsy azon' ny Israelita tamin' ny alalan' ny fanafihana miaramila i Kanaana. Ny nisian' ireo vahoaka israelita voalohany tao afovoan-tany tamin' ny taona 1200 tal J.K. dia vokatry ny fiovana anatiny niseho miandalana tao amin' ny fiarahamonina kanaanita. Noho izany, ireo Israelita voalohany ireo dia manam-pototra kanaanita.
Ny kolontsaina kanaanitaHanova
Ny fivavahan' ny KanaanitaHanova
Ny fivavahana kanaanita dia fitambarana fivavahana semitika maro isan-karazany tao amin' ireo Kanaanita hatramin' ny Andron' ny Alimo ka hatramin' ireo taonjato voalohany taor. J.K. Fivavahana amin' andriamanitra maro ireo fivavahana ireo (pôliteisma) ary indraindray koa fivavahana amin' andriamanitra tokana isam-poko na isam-pirenena izay tsy mandà ny maha andriamanitra ireo andriamanitry ny firenena na foko hafa (mônôlatrisma na henôteisma).
Ny andriamanitra El sy ireo andriamanitra manampy azyHanova
Ny Kanaanita dia mivavaka amin' ilay andriamanitra niandohan-javatra voalohany atao hoe El izay inoany fa rain' ny olombelona sy ny zavaboary rehetra. Ny tanimanga fanoratana hita tao amin' ny trano fitehirizan-tsoratry ny mpanjakan' i Ebla (toerana nanaovana fitrandrahana arkeôlôjika ao Tell Mardikh ao Siria), izay voasoratra tany amin' ny taonjato faha-24 tal. J.K., dia miresaka an' io andriamanitra io ho lehiben' ireo andriamanitra maro isan-karazany sy ho razamben' ny andriamanitra rehetra. Vadin' ny andriamanibavy Asherah i El araka ny voalaza tamin' ny tanimanga fanoratana tao Ogarita. Rain' ny andriamanitra maro izy ka ny lehibe amin' ireo dia i Haddad sy i Yam ary i Mot.
Ny fanahin' ny maty sy ny fivavahana aminyHanova
Mino ny Kanaanita fa aorian' ny fahafatesan' ny vatana dia miala amin' ny vatana ny fanahy (npš na npsh) ka mankany amin' ny tanin' i Mot ("Rafahafatesana"). Alevina miaraka amin' ny fananana natokana ho an' izany ny vatana sady anaovana fanatitra sakafo sy zava-pisotro mba tsy hanelingelina ny fiainan' ny velona ny fanahiny. Ivavahan' ny havany mbola velona ny fanahin' ireo maty ka matetika angatahany fanampiana. (Jereo: Fivavahana amin' ny razana).
Fiantraikan' ny fivavahan' ireo firenena hafaHanova
Nisy akony teo amin' ny fivavahan' ny Kanaanita ny fivavahan' ireo firenena matanjaka sy be mponina manodidina an' i Kanaana ka isan' izany ny fivavahana egiptiana sy mesôpôtamiana. Mivavaka amin' andriamanitra maro ny Kanaanita, sady mivavaka amin' ny fanahin' ny havany maty ny isam-pianakaviana izay mihevitra azy ireo ho andriamanitry ny isan-tokantrano, sady mahalala koa ny fisian' ireo andriamanitra hafa toa an' i Baal (Baiboly malagasy: Bala na Baala), i El, i Asherah ary i Astarte sy ny maro hafa koa, sady mivavaka aminy. Ninoana ho andriamanitra koa ny mpanjaka ary ny tantsaha dia nivavaka amin' ireo andriamanitry ny fahavokarana (fambolena sy fiompiana ary olombelona).
I Kanaana dia mahafaoka ireo tany ankehitriny atao hoe Libàna (na Libanôna) sy Israely sy ny tapany avaratra-andrefan' i Jôrdania ary ireo faritra andrefana ao Siria. Araka ny voaolazan' ilay arkeôlôga Jonathan N. Tubb dia nahatratra ny fiavahana ara-kolontsainy tokoa ny Amônita sy ny Môabita sy ny Israelita ary ny Fenisiana nefa samy atao hoe Kanaanita, dia ireo vahoaka niorim-ponenana teo amin' ny tanàna madinika maro fambolena tao amin' io faritra io tamin' ny taonarivo faha-8 tal. J.K..
Ny sivilizasiona kananeana dia vokatry ny toetany marin-toerana izay naharitra hatry ny ela nefa indraindray sembanin' ny fiovan' ny toetrandro. Nandritra ireo vanim-potoana ireo dia nahay nanararaotra ny toerana eo afovoan' ny sivilizasionan' ny tany Afovoany Atsinanana sy i Egipta tranainy ary i Mesôpôtamia (Somera, Akady, Asiria, Babilôna) sy ny Hitita ary i Kreta minôàna, mba hahatonga azy ireo ho tanàna-fajakana tapahin' andriandahy mpanao raharaham-barotra manaraka ny morontsiraka, izay misy fanjakà-mpanjaka mifantoka manokana amin' ny vokatry ny fambolena eny afovoan' ny tanety. Izany fifanoherana ara-toekaren' ny tanàna amorontsiraka sy ny tanàna anaty tany izany dia hita taratra amin' ireo fedrà kanaanita maneho ny adin' ny andriamanitry ny orambaratra atao hoe Teshub (ao amin' ireo Horiana na Horita) na Ba'al Hadad (ao amin' ny Amôrita sy Arameana) amin' ny andriamanitry ny ranomasina sy ny renirano atao hoe Ya'a na Yaw na Yahu na Yam. Tamin' ny fiandohan' ny sivilizasiona kananeana dia maro ny tanàna mimanda misy tsena, voahodidin' ny tanànanan' ny tantsaha misahana fambolena voninkazo sy oliva natokana ho an' ny varotra sy fambolena voaloboka sy hazo voanjo (siantifika: Pistacia vera), voahodidina fambolena varimbazaha sy ôrza. Ny fotoam-piotazana sy ny fijinjana amin' ny fiantombohan' ny fahavaratra dia fotoan' ny fifidrafidran-toeran' ny mpiompy mitondra ny bibifiompiny hitady sakafo; tsy afa-mihetsika ny mpiandry ondry mandritra ny fotoan' ny orana ka mandeha mody mba hamahana ny bibifiompiny amin' ny taho sy ny ravin' ny zavamaniry sisan' ny fijinjana, izay akaiky kokoa ny tahirin-drano amin' ny fahavaratra. Manaporofo izany tsingerim-potoan' ny fambolena izany ny tetiandron' i Gezer sy ny tsingerin-taona voalaza ao amin' ny Baiboly.
Matetika dia miteraka fahavoazana ho an' ny fambolena ny fiovan' ny toetrandro haingana; noho izany dia soloana amin' ny vokatra hohanina ny vokatry ny fambolena natao hamidy; ny fifindrafidran' ny mpiompy dia manjary mibahana ny taona manontolo, fa ny andiam-poko dia mivezivezy any avaratr' i Eofrata na any atsimon' i Telolafin' i Egipta miaraka amin' ny bibifiompiny. Matetika ireo filoha mpitarika foko no mipoitra tampoka ka manafika ny andian' olona mpifahavalo aminy sady manome valisoa ireo mpomba azy amin' ny alalan' ny entana voababony na fitakiana fadin-tseranana amin' ny entam-barotra. Raha mitambatra ka miara-manafika ny tanàna maromaro na raha misy fanjakana mpifanolo-bodirindrina mandray anjara na raha misy filoha mpitarika iharam-pahavoazana ka resy, dia voa koa ireo mpiray ady aminy na miverina indray ny ady eo amin' ny samy foko. Ny tantaran' ireo razamben' ny Israelita (Patriarka) ao amin' ny Baiboly dia ahitana taratra an' izany. Nandritra ny fotoana naharavan' ny Fanjakana akadiana tany Mesôpôtamia sy tamin' ny fotoana entenatenan' ny fanjakan' i Egipta tranainy sy ny fanafihan' ny Hiksôsy ary ny fiafaran' ny Andron' ny Alimo antenatenany tao Asiria sy tao Babilôna ary ny faharavàn' ny Andron' ny Alimo aoriana dia nihena ny raharaham-barotra tao amin' ny faritr' i Kanaana, satria lasa nitoka-monina i Egipta sy i Babilôna ary i Asiria. Rehefa miverina marin-toerana amin' izay ny toetany dia mahazo aina koa ny varotra manamorona ny ranomasina amin' ireo tanàna filistina sy fenisiana. Rehefa nihamilamina ny varotra dia nisy ny fanamboaran-dalana vaovao halehan' ny entam-barotra sy hialàna amin' ny fandoavana fadin-tseranana lafo loatra izay niforona tamin' ny morontsiraka hatrany Kadesy Barnea ka hatrany Hebrôna sy Lakisy sy Jerosalema sy Betela sy Samaria sy Sikema sy Silô izay mamaky an' i Galilea (na Galilia) hatrany Jezrela sy Hazôra ary Megido. Nisy tanàna kanaanita tsy dia malaza izay nihanandroso tamin' io faritra io. Nisy lalana fahatelo falehan' ny entam-barotra niforona teo anelanelan' i Eilata sy Timna sy Edôma (Seira) sy Môaba sy Amôna ary ireo mankany amin' ny Fanjakana arameanan' i Damasy (na Damaskôsy) sy Palmira. Ireo Fanjakana tranainy (toy ny Filistina sy ny Tiriana tao Jodà sy Samaria, ho an' ny lalana faharoa, ary i Israely ho an' ny lalana fahatelo) dia nanandrana nifehy ny varotra anatiny nefa tsy nahita fahombiazana.
Izany rehetra izany dia niteraka fandrosoan' ny varotra ka nitarika ireo firenena mpifanolo-bodirindrina matanjaka kokoa toa an' i Egipta sy i Asiria sy ny Babilôniana sy ny Persiana (na Persa) sy ny Grika ary ny Rômana hifehy ara-pôlitika ny Kananita sady naka hetra sy fadin-tseranana. Matetika amin' ireo vanim-potoana ireo dia misy ny fibosesehan' ny bibifiompy mitady hanina amin' ny toerana iray ka miteraka faharatsian' ny toetany izay miverimberina matetika. Ny fianjeran' ny sivilizasiona kananita taty aoriana dia niaraka tamin' ny nampidirana an' i Kanaana tao amin' ny tontolo grekô-rômana (ohatra: ny Faritanin' i Jodea / latina: Iudaea), taty aoriana tamin' ny andron' ny Bizantina tao amin' ny tontolo arabo miozolmana sy faritanin' ny kalifa ômeiada prôtô-miozolmana. Ny fiteny arameana andrefana, iray amin' ireo fiteny ifaneraseran' ny tsy mitovy fiteny tao amin' ny sivilizasiona kananeana, dia mbola ampiasain' ny tanàna madinika ao Siria, fa ny fiteny kananeana fenisiana dia nanjavona ka tsy nisy nampiasa intsony tamin' ny taona 100 taor. J.K. Ireo Asiriana ao Iràka sy Iràna sy ao avaratr' i Siria ary ao atsimo-atsinanan' i Torkia dia mbola mampiasa ny fiteny arameana atsinanana mifangaro amin' ny fiteny akadiana.
Ilay toerana atao hoe Tel Kabri (arabo: Tell al-Qahweh: "Havoan' ny Kafe") dia mitahiry ny sisa tamin' ny tanàna kananeana tamin' ny Andron' ny Alimo antenatenany (2000-1550 tal. J.K.). Izy no tanàna lehibe indrindra tao Galilea andrefa tamin' izany fotoana izany izay nanana lapa teo afovoany. I Tel Kabri irery ihany no tanàn-dehibe kananeana azo nohadina manontolo avy any ambanin' ny tany satria tamin' ny nandaozan' ny mponina azy dia tsy nisy tanàn-dehibe hafa naorina teo ambonin' ny sisam-paharavany. Marihina fa ny kolontsain' ny firenena avy any ivelany izay nisy vokany teo amin' ny kolontsaina kanaanita dia ny an' ny mponina tao Minôsy. Nisy sary hosodoko araka ny fanaon' ny Minôana nanaingo ny lapa.
Ny fiteny kanaanitaHanova
Ny fiteny kanaanita na fiteny kananeana dia iray amin' ireo zana-bondrona telo ao amin' ny vondrom-piteny semitika andrefana izay ahitana ireo fiteny semitika notenenina tao amin' ny tanin' i Kanaana, ka ny zana-bondrona roa hafa dia ny fiteny arameana sy ny fiteny ogaritika. Ny Kanaanita, amin' ny hevitra mivelatr' io teny io, dia mahafaoka ny Israelita (dia ny Jodeana sy ny Samaritana), ny Foinikiana (na Fenisiana), ny Amôrita, ny Amônita, ny Môabita, ny Edômita, ny Soteana, ny Ekrônita (filistina) ary ny Amalekita.
Ny fiteny kanaanita amin' ny hevitra mifintin' io teny io dia tsy manondro afa-tsy ireto fiteny ireto:
Taty aoriana dia voasolon' ny fiteny arameana, izay fiteny semitika koa, ireo fiteny kananeana ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanaana_(faritra)&oldid=1036832"
Dernière modification le 30 Aogositra 2021, à 13:50
Voaova farany tamin'ny 30 Aogositra 2021 amin'ny 13:50 ity pejy ity.